Isingeniso Somshini We-Lathe: Izinhlobo Ezi-16 Zomshini Wokuphotha - TSINFA
Isingeniso Somshini We-Lathe: Izinhlobo Ezi-16 Zomshini We-Lathe
I-Lathe ingenye yamathuluzi womshini asetshenziswa kakhulu emkhakheni wokucubungula izinsimbi. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamathuluzi omshini. Kunzima kubantu abangayazi le mboni ukuthi bacacise umehluko phakathi kwezinhlobo ezahlukene zamathuluzi emishini. Kuleli phepha, sihlukanisa kusuka kuzinhlelo ezingaphansi kwe-6: imodi yokulawula, ukwakheka komshini, ukusetshenziswa, izinto zokucubungula, inani labaphethe amathuluzi, uhlobo lwezingxenye zemishini. Nakuba izinhlobo ezahlukene zamagama lathe, kukhona amacala isiphambano, ezifana igebe embhedeni lathe umshini Ubuye lathe ovundlile, ipayipi intambo lathe futhi ineUmshini we-CNC lathe, kodwa akuthinti ukuqonda kwethu i-lathe.
Izinhlobo lathe umshini isingeniso:
Isendlalelo sokulala embhedeni
I-crankshaft lathe, i-camshaft lathe, i-wheel lathe, i-axle lathe, i-roll lathe ne-ingot lathe, ithuluzi lokuguqula nokugaya umshini, i-wheelet lathe, ipayipi yentambo
Ngokusho kwezinto ezisetshenzisiwe
Metal ukusika lathe
Kuhlukaniswe ngenani labanamathuluzi
Ithuluzi elilodwa lomnikazi we-CNC lathe, ophethe ithuluzi kabili i-CNC lathe
Kuhlukaniswa ngohlobo oluyisisekelo lwezingxenye ezenziwe ngomshini
Uhlobo Chuck CNC lathe, phezulu CNC lathe
Njengamanje, kunezindlela ezimbili zokulawula i-lathe, eyodwa ukulawula okwenziwa ngesandla, kanti enye ukulawula uhlelo lwe-CNC. Ngokusho kwezindlela ezahlukene zokulawula, i-lathe ihlukaniswe nge-lathe evamile ne-CNC lathe.
I-lathe jikelele inento yokucubungula ebanzi, uhla lokulungiswa kwejubane lokujikeleza lokuphotha kanye nenani lokuphakelayo likhulu. Ubuso bangaphakathi nobangaphandle, ubuso bokugcina, nemicu yangaphakathi neyangaphandle yomsebenzi ingacutshungulwa. Lolu hlobo lwe-lathe lusetshenziswa kakhulu ngesandla yisisebenzi. Kulula ukusebenza. Esigabeni sokuqala, ijubane liyalungiswa, igiya liyasuswa, isigwedlo sokuqala siyaphakanyiswa, bese kuthi induku yokudlala iphokophele phambili. Ithuluzi lokujika liqhubekela phambili, ukudonsa kwangemuva, ithuluzi lokujika lihlehlela ngakwesobunxele, nethuluzi lokujika liya ngakwesobunxele. Kwesobunxele nangakwesokudla kuyafana. Yize ukusebenza kwemoto ejwayelekile kulula, ukucutshungulwa kwezingxenye kungumsebenzi wezobuchwepheshe, futhi abasebenzi bazobheka amathuluzi wokulinganisa nemidwebo yokucubungula. Lapho kusetshenzwa amaqoqo amancane ezingxenye, ama-lathes ajwayelekile anenzuzo enkulu yokusebenza kahle kune-CNCumshini lathe. Izikhathi eziningi lathes jikelele-injongo kusetshenzwe, futhi lathes CNC namanje esigabeni izinhlelo. Ngenxa yalesi sici, i-lathe ejwayelekile isenemakethe, efanelekile ngocingo olulodwa, ama-workshops wokukhiqiza amancane kanye nokugcinwa.
Lezi zingqimba zingahlukaniswa ngezigxobo ezivamile zokucaciswa okuhlukile, njenge-LT6232 ne-LT6250, ngokuya ngobude besikhungo nebanga lesikhungo. Ngaphezu kokuguqula zonke izinhlobo zobuciko bokujikeleza, bangabuye baguqule imicu ehlukahlukene, enjengentambo ye-metric, intambo ye-intshi, intambo ye-modulus, intambo ye-diametric nentambo yokuphela.
Ukuze uthuthukise ukucubungula ububanzi be-lathe evamile, kukhishwe i-gap lathe lathe (ebizwa nangokuthi i-saddle lathe).
Ukuphela kwesobunxele kwesikhala semibhede yegebe ngaphambili kwebhokisi eliyinhloko kucwile futhi kungabamba izingxenye ezinkulu zobubanzi. Umumo welitha unamakhanda amabili ukuphakama, uphansi phakathi, futhi ubukeka njengesihlalo sehhashi, ngakho-ke ubizwa ngokuthi umugqa wesali. I-lathe yesikhwama ilungele izingxenye zemishini ezinobukhulu obukhulu be-radial nobukhulu be-axial encane. Kufanelekile ukuguqula umbuthano wangaphandle, umgodi wangaphakathi, ubuso bokugcina, islot nemethrikhi, i-intshi, i-modulus, intambo ye-warp, ne-drilling ne-boring. , izama kabusha nezinye izinqubo, ezifanele ikakhulukazi amabhizinisi okukhiqiza amaqoqo. I-lathe yesihlalo sehhashi ingacubungula imisebenzi yobubanzi obukhulu emseleni wesihlalo. Imihlahlandlela yethuluzi lomshini iqina futhi iphansi kahle ukuze isebenze kalula futhi ithembeke. I-lathe inezici zamandla aphezulu, isivinini esikhulu, ukuqina okuqinile, ukucacisa okuphezulu nomsindo ophansi.
I lathe CNC ithuthukiswa kusukela lathe, futhi uhlelo lokulawula uhlelo kunezelwa umshini main. Uhlelo lulawulwa wuhlelo lokulawula umshini ukwenza umsebenzi ngokuya ngenqubo ebekiwe, ukuqedela umjikelezo wenqubo yonke yokwenza imishini.
Njengama-lathes ajwayelekile, ama-lathes e-CNC asetshenziselwa ukwenza umshini indawo ejikelezayo yezingxenye. Ngokuvamile, ingakwazi ukuqedela ngokuzenzakalela ukucubungula kwendawo engaphandle eyindilinga, indawo eyindilinga, indawo eyindilinga nentambo, futhi ingacubungula ezinye izindawo ezijikelezayo eziyinkimbinkimbi, ezinjenge-hyperboloids. Okokusebenza kwe-lathe ne-lathe ejwayelekile kufakwe ngendlela efanayo. Ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokucubungula, ama-lathes wokubacindezela ikakhulukazi ama-hydraulic, womoya kanye ne-chucks kagesi.
Ukuma kwensimbi ye-CNC kufana nokwendwangu evamile, okusho ukuthi, kunombhede, isigqoko senhloko, umnikazi wamathuluzi, uhlelo lokucindezela uhlelo lokuphakela, uhlelo lokupholisa nokugcoba. Uhlelo lokondla lwe-lathe ye-CNC ngokwezibalo luhlukile kulona olujwayelekile. I-lathe ejwayelekile inebhokisi lokuphakelayo kanye nesithwali sokushintshanisa. I-lathe ye-CNC isebenzisa ngqo i-servo motor ukushayela isilayidi nesiphathi sethuluzi ngokusebenzisa isikulufa sebhola ukubona ukunyakaza kokuphakelayo. Isakhiwo sohlelo lokuphakelayo senziwe lula kakhulu.
Izikhiye zanamuhla ze-CNC sezivele zithandwa ngokulawulwa kwe-microcomputer. Okwamanje kunezigaba ezimbili ze-CNC lathes, esinye sazo iyithuluzi lomshini elilawulwa nge-microcomputer, kanti elinye liyithuluzi lomshini elilawulwa yikhompyutha. Ngesikhathi sokusebenza, i-CNC lathe yenza izibalo ngokuya ngemiyalo yohlelo lokufaka futhi ifaka imiphumela yokubala kwiyunithi yedrayivu. Idivayisi yedrayivu yokulawula yenza ukubala ngokusho komyalo, ifaka umphumela wokubala kudivayisi ye-drive, ilawula idrayivu (i-stepper motor) enkabeni yedivayisi yokushayela ukushayela indlela yokudlulisa imishini, futhi isebenza isinyathelo sokusebenza somshini ithuluzi (ikalishi elide nelivundlile) ukubona ukunyakaza kokusika.
Isici esiyinhloko se-lathe enezingqimba ukuthi i-eksisi enkulu ifana nebhentshi lomsebenzi futhi ibukeka sengathi ilele phansi. Izindwangu ezivundlile zikulungele ukucubungula imisebenzi yokusebenza elula engabubanzi obukhulu kepha yinde. Lokhu kungenxa yokuthi i-lathe evundlile icutshungulwa yi-chuck nangaphezulu kuqhathaniswa nomsebenzi wokusebenza. Lesi sakhiwo sinquma ukuthi isisindo sento yokusebenza asikwazi ukuba sikhulu kakhulu. Umthwalo ovamile ophakeme ngu-300 kg, kanti umshini osindayo ungathwala ithani eli-1. Ubude bokucubungula buyinzuzo enkulu yelithi evundlile ngokuhlobene ne-lathe mpo.
Ubude bokucubungula yi-750mm, 1000mm, 2000mm, 3000mm, 4000mm noma i-8000mm, njll.
Isici esiyinhloko se-lathe esime mpo ukuthi uthi lokuphotha lubhekiswe etafuleni futhi indawo yokusebenza ibambeke etafuleni. I-lathe eqondile ilungele ukucubungula imisebenzi esindayo enobubanzi obukhulu nobude obufushane. Lokhu kungenxa yokuthi ku-lathe mpo, ukubambeka nokuqondaniswa kwezingxenye kulula, futhi umhlahlandlela wokujikeleza phakathi kwetafula elisebenza kanye nesisekelo unamandla okuthwala angcono. Ubushelelezi bokuhamba ngesikhathi somsebenzi buphezulu, ngakho-ke ikhwalithi yokucubungula yezingxenye iphezulu, kepha ikhwalithi yalezi zingxenye kunzima ukuyiqinisekisa lapho ibekwa kuma-lathes ajwayelekile nasemaphethelweni okuphela.
Izikebhe eziqondile zingahlukaniswa zibe yizingxenye eziqondile zekholomu eyodwa nezinsika eziqondile ezinamakholomu amabili. Izindwangu eziqondile zekholomu eyodwa ngokuvamile zinesiphathi sethuluzi esiqondile kanye nesiphathi sethuluzi eseceleni. Bobabili abanikazi banamabhokisi wokuphakela ahlukile angasetshenziswa ngasodwana noma ngasikhathi sinye ngamaphasi amile futhi avundlile. Lathes ezinkulu mpo ngokuvamile babe uprights ezimbili. Ukuze kube lula ukucubungula, i-lathe yamakholomu amabili amile ngokuvamile aneziphathi zamathuluzi amabili mpo nomnikazi wethuluzi ohlangothini olulodwa. I-poster emibili emikhulu inesiphathi sommese oseceleni kukholamu ngalinye kulawa amabili.
Ukwakheka kwesitimela okuthambekele kuvumela i-lathe ukuba ibe lukhuni ngokwengeziwe futhi kube lula ukususa ama-chips.
I-Crankshaft lathes, i-wheel lathes, i-roll lathes ne-ingot lathes, amathuluzi wokuguqula nokugaya, amapayipi wentambo.
I-Crankshaft lathe uhlobo olukhethekile lwentambo esetshenziselwa ukwenza intambo yokuxhuma intambo nohlangothi lwengalo yenjini yomlilo yangaphakathi kanye ne-air compressor crankshaft.
I lathe isondo CNC
I-lathe yamasondo e-CNC iyithuluzi elikhethekile lomshini lokukhanda nokulungisa amabhangqa amasondo emishini yesitimela. Ukuze kuthuthukiswe isilinganiso sokusebenza nentengo sethuluzi lomshini, uhlelo lwe-CNC lomnikazi wamathuluzi ophindwe kabili we-lathe yesondo lwakhiwa, futhi ukulinganisa okuzenzakalelayo, ukusethwa kwamathuluzi nemisebenzi yokusika yezomnotho yohlelo lwe-CNC kwaxoxwa ngayo. Kuyimodi yokusebenza okuzenzakalelayo ngokuphelele, futhi ifakwe uhlelo lokulinganisa oluzenzakalelayo, olubala ngokuzenzakalela imingcele efanelekile yokusika ngemuva kokulinganisa indawo yokunyathela yesondo elizolungiswa.
Ama-lathes e-roll angama-lathes aklanyelwe ukucubungula imiqulu. Imiqulu ngokujwayelekile iyimiqulu esetshenziswa esigayweni esigingqikayo. Ingumumo omkhulu kakhulu, osindayo futhi osindayo oyindilinga onemifantu kuwo.
Umshini wokuguqula nokugaya
Ukujika futhiumshini wokugaya wendawo yonkeithuluzi machining esiyinhlanganisela ingenye ethandwa kakhulu machining izinqubo emhlabeni machining. It is a advanced yokukhiqiza technology. Imishini eyinhlanganisela ukuqaliswa kwezinqubo ezahlukahlukene zemishini emshinini owodwa. UkugayaUkubhola, umshini wokujika. Ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe kusetshenziswa kakhulu kunazo zonke futhi okunzima kakhulu inhlanganisela yokuphenduka nokugaya. Ukuphenduka nokugaya isikhungo semishini esihlanganisiwe silingana nenhlanganisela yensimbi ye-CNC nesikhungo semishini.
Intambo yethanga lepayipi
Pipe ngentambo lathe, owaziwa nangokuthi ipayipi ngentambo lathe, kuyinto lathe enezingqimba eyenzelwe ngokuvula enkulu-ubukhulu ipayipi nokufakwa. Ifaka imbobo enkulu yomgodi omkhulu (imvamisa i-135mm noma ngaphezulu) kanye ne-chuck ngaphambili nangemuva kwebhokisi lokuphotha. Ukuze kwenziwe lula ukucindezelwa nokucutshungulwa kokufakwa kwamapayipi amakhulu noma imigoqo, umkhiqizo usetshenziswa kakhulu ekusetshenzisweni kwemishini yokukhiqiza imishini, uphethiloli, amakhemikhali, amalahle, ukuhlola okwakheka komhlaba, ukuhanjiswa kwamanzi emadolobheni nezimboni zamanzi.
Imoto yokusika insimbi iyefana nemoto esebenza ngokhuni ngoba isetshenziselwa ukusika okokusebenza ngokushintshanisa okokusebenza ngokuhlangana nethuluzi.
Kodwa-ke, umehluko phakathi kwalokhu kukhulu futhi:
Isakhiwo somphathi wommese sihlukile. Izimoto ezisebenza ngokhuni ziguquguquka kalula. Isibonelo, ukusebenzisa i-lathe yensimbi yokusika ukushayela i-vase, ukuhambisa ithuluzi ukuyibumba kungaba nzima.
Uhlobo lwento yokusebenza luhlukile. Umsebenzi wensimbi esebenza ngensimbi ngokuvamile uyafana, futhi ukuminyana nobulukhuni kuhlala ngokufanayo, ngakho-ke kunganqunywa ngo-3mm ngasikhathi sinye, futhi ithuluzi lingasuswa ngokuzenzekelayo. Uma izinkuni zisetshenziswa ngale ndlela, izinkuni ziyacasulwa ngisho nezinkuni zidwengulwe. Imoto yokusika insimbi eqinile isika kangcono.
Amathuluzi okuphendulela ahlukile. Umkhawulo wokusika wethuluzi lokujika awufani ne-engeli.
Uhlobo lwe-Chuck CNC lathes
Lawa ma-lathes awanamthungo futhi alungele ukuguqula ama-disc (kufaka phakathi imiphini emifushane). Iningi lezindlela zokubamba zingugesi noma i-hydraulic control, futhi isakhiwo se-chuck sinemihlathi eminingi eguquguqukayo noma imihlathi engacimi (okungukuthi, imihlathi ethambile).
Ama-lathes aphezulu we-CNC
Lezi lathes ifakwe umsila ovamile noma umsila we-CNC. Zikulungele ukuguqula izingxenye ezinde nezingxenye zediski enobubanzi obuncane.
Ngaphezu kwalokho, ingahluka ngokuya ngokunemba kokusebenza kwayo
I-lathe ihlukaniswe nge-lathe jikelele, i-lathe yokunemba kanye ne-lathe ephezulu. Ama-lathes we-Precision kanye ne-high-precision ngokuvamile asuselwa kuzinsika ezijwayelekile zokunemba. Ngokuthuthukisa ukunemba kwejometri komshini, ukunciphisa imiphumela yokudlidliza nemithombo yokushisa, nokusebenzisa amabheringi asebenza kahle, umshini unokunemba okuphezulu kwemishini.
Noma yimiphi imibuzo sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Xhumana Nethimba Lethu Losizo
Sicela ushiye le nkambu ingenalutho.